Mihena ny isan-dranomasina any Mediterane | Fanavaozana maintso
Asa ataon'ny olombelona noho ny fitrandrahana ny harena voajanahary fahasimbana lehibe amin'ny toeram-ponenan'ireo karazana maro, mitarika amin'ny fihenan'ny isan'ny olona totalin'ny mponina ary, indraindray, mametraka ny karazany aza atahorana ho lany tamingana.
Izany no mitranga amin'ireo mponina ao ranomasina sy trondro fanjaitra any amin'ny Ranomasina Mediterane. Inona no mitranga amin'ireo karazana ireo?
1 Mihena ny isan'ny ranomasina
2 Fampahalalana sy fiarovana ny ranomasina
Mihena ny isan'ny ranomasina
Ny Vondrona Iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny natiora (IUCN) dia nampitandrina ny amin'ny famantarana voalohany amin'ny fihenan'ny isan'ny ranomasina sy ny fanjaitra ao amin'ny Ranomasina Mediterane. Ny toa manondro indrindra fa miteraka io fihenan'ny isam-batan'olona io dia ao anaty loza mitatao noho ny asan'ny olombelona. Ny fahaizan'ny jono manimba dia miteraka fahasimbana sy fahasimban'ny toeram-ponenan'ireto karazana ireto ary mitarika fihenan'ny isan'ny mponina.
Ankoatr'izay dia tsy ny fihenan'ny toeram-ponenany ihany no iharan'izy ireo, fa satria maro amin'izy ireo no voafandrika sy azon'ny jono trawl. Vantany vao voasambotra izy ireo dia tsy averina any an-dranomasina intsony, fa natao hamidy any anaty aquarium, ho an'ny fanafody nentim-paharazana, ary ho toy ny agulety mahaliana sy ara-pivavahana.
Raha ny lisitr'ireo karazan-javamaniry mandrahona, efa ho 15% ny karazan-dranomasina no ao amin'ny sokajy "Near Threatened" any amin'ny Mediterane. Midika izany fa raha mitohy amin'ireto karazana fandrahonana sy fihenan'ny mponina ireto ny karazana dia atahorana ho lany tamingana izy ireo tsy ho ela.
Fampahalalana sy fiarovana ny ranomasina
Raha ny mahazatra, ny antsasaky ny karazany dia sarotra ny fanisam-bahoaka noho ny antony fidirana sy ny hafa, ary tsy manana fampahalalana ampy hanombanana ny loza mety hanjavonany izy ireo. Izany no antony takiana fikarohana bebe kokoa momba an'io karazana io hahafantarana tsara ny faritra fizarana azy, ny fironan'ny mponina, ny fandrahonana mety hitranga ary ny faharefoana ary, amin'izany fomba izany, hahafahana mandray fanapahan-kevitra momba ny fiarovana azy io.
Ireo karazany roa ireo izay sokajiana ho "akaikin'ny fandrahonana" dia eo amin'ny fihenan'ny eo anelanelan'ny 20 sy 30% tao anatin'ny roapolo taona lasa, na dia eo aza ny fiarovana azy ireo amin'ny alàlan'ny Fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena amin'ny karazan-biby tandindonin-doza fauna sy flora (CITES).
Voaro ihany koa izy ireo ao amin'ny Annex II an'ny Protocol momba ny faritra arovana manokana sy ny fahasamihafana biolojika ao amin'ny Fifanarahana ao Barcelona ary, ankoatr'izay, ny firenena mediteraneana sasany toa an'i Slovenia dia miaro azy ireo manokana amin'ny lalàna misy azy ireo.
Na izany aza, ireo fitsipika ireo tsy ampy ary koa ny fiatrehana ny toe-javatra misy ny fahasimbana na ny fahasimban'ny toeram-ponenana ateraky ny fanodinana trondro sy ny fitrandrahana ala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » General » Mihena ny isan-dranomasina any Mediterane